कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहर सुरु: कुन देशको अवस्था कस्तो, भारतले खोप निर्यात रोक्यो ? - Nepal Page Nepal Page
कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहर सुरु: कुन देशको अवस्था कस्तो, भारतले खोप निर्यात रोक्यो ?
काठमाडौं, १२ चैत । अमेरिका, ब्राजिल, भारत, टर्की, इटली, जर्मनी, पोल्याण्डलगायत देशहरुमा कोरोना सङ्क्रमणको दर अस्वाभाविक रुपमा बढिरहेको छ । यी देशहरुमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु भए पनि यी देशहरुमा भने कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च भएको हो ।